Inter-ethnic conflicts and humanitarian crises in Ethiopia @dwnews Kichuu
HomeNewsAfricaInter-ethnic conflicts and humanitarian crises in Ethiopia @dwnews
Inter-ethnic conflicts and humanitarian crises in Ethiopia @dwnews
Inter-ethnic conflicts and humanitarian crises in Ethiopia @dwnews.
Dhaamsa Dr. Mararaa Qeerroof:
• Qeerroon meeshaa /tajaajiltuu dhaaba siyaasaa/jaarmiyaa tokkoo miti. Ta’uus hin qabu.
• Qeerroon motoora jirjiiramaa ti.
• Qeerroon seera dhabdummaa ykn gochoota seermaleeyyii irraa of eeguu qaba. Wantoota hin taane dalaguu hin qabu. Seera kabajee kabajsiisuu qaba malee.
DHDUOn Dhaaba Cubbuu hin Sodaanneedha; Aktiivistoonni amma ka’anii Qabsoo Oromoo laamshessuutti jiranis faanuma jaraati!
1. Sabboonummaa uummata Oromoo OPDOn jaalattee hin beektu. Jaalachuufis hin dandeessu. Sabboonummaa dimokiraasii waanta jedhamu uummata keenya keessa waggaa 15 oliif facaasaa turteetti. Sabboonummaa dimokiraasii jechuun akka kitaabaafi dabballee isaanitti, Oromoon saba tokkoo miti jedhu. Sab-lammii hedduu garboofatee/guddifachaan/ saba bal’aa ta’ee jedha. Summii kana hawaasa keenya keessatti magarsuuf tattaaffiin guddaatu ta’e. Har’as harka lafa jalaan waan dhaabbate miti. Dhaabbachuus hin danda’u hanga dhabni DHDUO miseensa AWDUI’rratti rarra’ee jiruufi hoogantoota qulqulluu quuqama lammii qabaniin guutamutti. Dabballoonniifi miseensoonni DHDUO xiqqoos ta’u saamaniiru. Mana gandaa hanga fudhachiifi dhuunfaan ijaarrataniiru. Waaqayyotu hin eebbifneef malee ijoolleesaanii mana baruumsa dhuunfaatti barsiifataniiru.
2. Sabboonummaa Oromoo ni sodaatu. Gaaga’iinsa Ilmaan Oromoo waggoottaan 27 keessaatti harki DHDUO haaxiqaatuu malee alagaa waliin raawwataniiru. Kanaafuu, sodaa guddaa of keessaa qabu. Waanti hubatamuu qabu garuu, gafaa balleessuuf dhama’anii harka isaanii miciiree of harkatti galche bu’aa dhaaba keenyaati jedhu. Dabballoonni OPDO alagaa waliin uummata Oromoo jilbeeffachiisuuf waantoonni gurguuddaa dalagan keessaa hangi tokko:
a. Alagaa waliin qubeen Afaan Oromoo balleessuuf bara 19 84-1990 ALH nama qubee baratee, barsiise, barreessaa, manxasaa, gidiraan fixaniiru
b. Alagaa waliin barumsi naannoo Oromiyaa akka laafuufi barattoota cicciimoo Oromoo hidhuufi ajjeechaan yakka guddaa dalaganiiru. Fkf 1984-12001ALH naannoo Amboo fudhachuun ilaaluudh,
c. Alagaa waliin meeshaa waraanaa uummata Oromoo sangaasaa gurguree bitate saamanii harka duwwaatti hambisaniiru
d. Alagaa waliin ta’uun lafa baadiyyaa qotee bulaa sabboonaa Oromoo ilmaansaa ABO jedhdamanii guuranii dabballoota saaniif hiraniiru. ABOn laandanii lafa isiiniif haa kennu jedhaniiru. Fkf Amboo Naannoo Meexxi,waddeessa, uummata Oromoo hiyyummaatti kufsaniiru,
e. Alagaa waliin gootota/keessattu labata harawaa/ uummata Oromoo fixanii sodaatti hambisuuf dalaganiiru
f. Alagaa waliin Irreecha uummata Oromoo balleessuuf kaffaltii guddaa itti dhangalaasanii tattaaffii guddaa taasisaniiru. Bara 19 85-2004 ALH
g. Alagaa waliin daangaafi lafa Oromoo ciranii waan sukkanneessaa godhaniiru: Fkf finfinnee, direedawaa, Harar, Asoosaa, naannoo hawaasa, walloo, raayyaa…
h. Alagaa waliin lafa magaalaa uummata Oromoo hundaa saamuun magaalota murtaa’aniin ala magaala silxee, tigree, hararii, guraagee, Amaaratti taasisaniiru
i. Alagaa waliin daldaaltota Oromoo xiqqoo hanga guddaatti duguuganii balleessuu yaalaniiru Fkf Amalgaameetidi (Gabrayes Beenyaa), Daldaltoota Jimaa, Konkolaataa geejibaa scania40 (ijoollee raamis), Exportarota buna, Importarota qorcha, Hospitaala Angafa Markaatootti dhaabbata (Hagar hiyooti), Mulunaa Kaakaa, , hoteelota magaala Oromiyyaarratti saffisaan bara 1984-1995 ALH hunda saamanii alaga harkatti galchaniiru,
j. Alagaa waliin dhaabolee mit-mootummaafi Afooshota Oromoo hundaa’an duguuganii balleessaniiru Fkf:- Waldaa meccaafi Tuulamaa, Waldaa Hayyoota Oromoo, Oromiyaa Greener, Waldaa wal gargaarsa barattoota Oromoo….
3. Tokkoo hanga kudhan warren tarreesse keessa yeroo ammaallee dagaaguu dadhabee kan achiin bade hedduudha. Waanti guddaan akka dinqiitti fudhatamuu qabu DHDUO balleessuuf dhama’anii harka isaanii miciiree of harkatti isaan galche bu’aa dhaaba kenyaati jechuu isaaniiti. Qabsoo qeerroon itti fixanii harka isaan keennachiise har’aa akka jijjiirama dhaabni DHDUO fidetti odeessu.
Kanaafuu qabsoo uummata Oromoo har’as taanaan abdii DHDUO waanti ciisnu hin jiraatu. Itti fufuu qaba. DHDUOn yemmuu ijibbatanii dadhaban cina hiriiruun faacha fudhachuu beeku.T. N)
Gulf-Horn of Africa Geopolitics: The New Frontier https://t.co/Bt1eFCjkHo
— Kichuu (@kichuu24) August 19, 2018
Kadijaa Hajjii Anii oromoodhaa Anii Waqqefattudhaa jeteettii
ውጭ ሃገር የነበሩ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾችና አክቲቪስቶችጅግጅጋ ገብተዋል